5 Tusaalooyin Banner Bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Calanka Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee loogu talagalay dhiirrigelinta degel internet, taas oo ah sababta ay ugu dhowdahay inay lagama maarmaan tahay in la hubiyo in nashqadeynta ay keeneyso saameyn muuqaal ah oo soo jiidasho leh martida. Dareenkan maanta waan arki doonaa 5 arrimo banner oo bilaash ah taasi waxay noqon doontaa mid waxtar badan.
Banners Web Classy. Tani waa xirmo ka kooban 15 calammo websaydh ah, oo laga heli karo saddex cabbir oo kala duwan, iyo sidoo kale shan ikhtiyaar oo midabbo kala duwan ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaad ku heli kartaa boorar kala duwan oo aad ku isticmaali karto goobta.
Wobox Xaaladdan oo kale waa nooc ka mid ah calanka dhiirrigelinta, ee cabbirka isbeddelka ah oo lagu beddeli karo tiro badan oo midabbo ah. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa qaabeynta farta oo lagu soo dejisan karaa qaabka faylka PSD, oo diyaar u ah inay ka shaqeyso Photoshop.
Afar Midab Calaamadaha Webka. Halkan waxaan ku haynaa shaybaar PSD oo ay ku jiraan afar walxood oo aan ku shaqeyn karno. Boodhadhka midabada leh sidoo kale si buuxda ayaa wax looga beddeli karaa oo sahlan in lala shaqeeyo si loogu isticmaalo xayeysiinta.
Calaamadaha PSD ee bilaashka ah. Waa template bixiya naqshad nadiif ah oo muuqaal ahaan soo jiidasho leh, iyada oo looga dan leeyahay in lagu soo jiito dareenka dadka soo booqda ka dibna loo soo saaro qasabno ganacsi.
3D Banners. Waa shaashad banner leh naqshad 3D ah, taas oo siineysa goobta rafcaan gaar ah oo la xiriirta habka loo soo bandhigi karo xayeysiinta. Boodhadhku waa buluug, oranji iyo cagaar, oo leh walxo ay ka mid yihiin badhamada iyo 3D-yada loo yaqaan 'ribbons', mid walbana wuxuu la qabsan karaa cabirka mashruuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » WordPress » 5 arrimo banner oo bilaash ah